पहिला आरोपको फायर केपी ओलीले खाेलेका हुन्, प्रचण्डले त जवाफ मात्रै दिएका हुन् : माधव नेपाल
बाह्रखरी - अक्षर काका शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७
सचिवालय बैठकमा बोल्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजलाई निकै घटिया आरोप बताए । “यस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लाञ्छनाहरू जीवनमा मैले पहिलोपल्ट यति गरिमामय ठाउँमा वितरण भएको भोग्दै छु । यसभन्दा अगाडि यस स्तरको भाषा, शैली र आरोप लगाइएको अनुभव कमिटीभित्र मेरो थिएन, शायद अरु कसैको थिएन । कहिल्यै कसैले यस्ता आरोपहरु लगाएको यस ढंगले राजनीति नै सिध्याउने मनसायका साथ उत्रिएको मैले पाएको थिइनँ,” उनले सचिवालय बैठकमा भनेका थिए ।
“अहिले फायर केपी ओलीले सुरु गरेको हो, पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई हामी पाँचजनाले सही गरेर चिट्ठी दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन बन्यो ? यसको कारण खोज्नु पर्दैन ? उहाँ खोज्नुहुन्न,” नेता नेपालले सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा भने, “उहाँले बैठक बोलाउन चाहनुभएन । प्रचण्ड हत्तु हुनुभयो । ओली भन्नुहुन्छ– पहिले सहमति गरौं । त्यस्तो पनि हुन्छ ? सहमति, सहमति होइन, बैठक अनिवार्य शर्त हो ।”
धर्मसंकटमा नेपाल ! आज आउला त सामूहिक राजीनामा ?
विद्यादेवी भण्डारी साक्षी राखेर ओली–नेपालबीच विवाद साँघुर्‍याउने समझदारी
प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ शुक्रबार दिउँसो २ बजे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ शुक्रबार हुने भएको छ । शपथ हुने राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रुपनारायण भट्टराईले बाह्रखरीलाई... २ घण्टा पहिले
ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई ठूलो दलको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त... २ घण्टा पहिले
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्तास्वार्थका लागि बाह्य शक्तिका पाउमा त्वमशरणम् गर्ने प्रवृत्ति आजको मुख्य चुनौती भएको... ३ घण्टा पहिले
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयल गठबन्धन सरकारका लागि कसैको दाबी नगरेको जानकारी दिएको छ । प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६... ३ घण्टा पहिले
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाटीहरूको फुटेको भन्दा जुटेको राम्रो भएको बताएका छन् । नेकपा एमालेको... ३ घण्टा पहिले
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको गठबन्धन सरकारका लागि आह्वान गरेको समयसीमा समाप्त भएको छ ।... ३ घण्टा पहिले